Iingcebiso zokususa amabala amdaka ebusweni ngokwemvelo | Amadoda aQinisekileyo
Las Iindawo ezimdaka okubangelwa kukucheba kuhlala kubububi obunokubonwa. Inxalenye ephezulu yomlomo iba mnyama ngenxa yokunyuka kwe-melanin kwi piel, ebangela ukuba le ndawo ibemnyama ngaphezu kobuso bonke, ibangele umphumo wamadevu.
Kukho iindlela zokufihla kunye nokwenza lula amabala abangelwa yi uchetyiwe ubuso, kwaye wenze ithoni yolusu ngakumbi iyunifomu kwaye ube nobuhle ngakumbi.
2 I-Chamomile kunye nobusi
Las amabala okubangelwa kukucheba ubuso bunokususwa ngoncedo lwe lemon, isithako esisebenza ngokwendalo kwaye sisebenza ngokukuko ekuthambiseni ulusu. Ukususa amabala ulusu olunelamula, incindi yesi siqhamo kufuneka ifakwe ubusuku bonke kwindawo echaphazelekayo.
Akucetyiswa ukuba uhlambe ngaphambi kosuku olulandelayo, kodwa kufuneka icocwe ngexesha elifanelekileyo ukususa iintsalela ze incindi yelamuni kwaye uthambise into yokuthambisa. Kukulungele ukwenza olu nyango ubuhle busuku ngabunye ukuqaphela iziphumo zemon kwiimpawu zesikhumba.
I-Chamomile kunye nobusi
La chamomile Ngumlingani olungileyo ukususa amabala amdaka ebusweni ngokwendalo kuba ineempawu ezinceda ukukhanyisa ulusu. Ukuyisebenzisa, lungiselela nje ukumiliselwa kwe chamomile kwaye ungeze ubusi obuncinci. Ukuba ufuna ivumba lonyango lwendalo lube ngcono, ungongeza amathontsi ambalwa wamanzi e-rose.
Nje ukuba xubaNgoncedo lwebhola yomqhaphu, ukumnika kufakwa ebusweni. Vumela ukuba isebenze imizuzu eli-15 uze uhlambe nayo amanzi zipholile. Ukuba lo msebenzi uphindwa kabini ngeveki, iziphumo ze chamomile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iingcebiso zokususa amabala ansundu ebusweni ngokwendalo
Iingcebiso xa uhlobisa itafile yesidlo sangokuhlwa kunye nabahlobo
I "mun" okanye amadoda anesaphetha